ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ..? - YomaLan
ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ..?
ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင် ရောဂါကို အခုအခါမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး အနေအထားနဲ့ ကာကွယ်ဆေး ထိုးခြင်းတွေ ပြုလုပ်နေပါတယ်။ ဒီတော့ မေမေတို့တွေ သိချင်နေတဲ့ ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင် ရောဂါအကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒီဆောင်းပါးလေးမှာ အနည်းငယ် ပြောပြချင်ပါတယ်။
ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင် ရောဂါဆိုတာ ဘာလဲ။
ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင် ရောဂါဆိုတာ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါလိုပဲ ခြင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်အတိုင်း ဦးနှောက်ရောင်ရမ်းမှု့ကို ဖြစ်စေပြီး ဖြစ်ပွားခဲ့လျှင် သေဆုံးနှုန်း ၃၀% ခန့်ရှိပြီး မသန်စွမ်းဖြစ်ပွားစေဖို့ရာ ရာခိုင်နှုန်း ၅၀% ခန့် ရှိပါတယ်။ ဖြစ်ခဲ့ရင် ကုသဖို့ ဆေးမရှိပါဘူး။ အခုဆိုရင် အရှေ့တောင် အာရှမှာ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု့ များနေတဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ရောဂါတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရောဂါကို ၁၈၇၁ ခုနှစ်လောက်က ဂျပန်နိုင်ငံမှာ စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဂျပန်ဦးနှောက် ရောင်ရောဂါလို့ ခေါ်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင် ရောဂါဖြစ်ရင် ဘယ်လို လက္ခဏာတွေ ခံစားရလေ့ရှိလဲ။
များသောအားဖြင့် ရောဂါ လက္ခဏာ ပြလေ့မရှိပါဘူး။ ကူးစက်ခံရသူ အယောက် ၂၅၀ လောက်မှာ ၁ ယောက်လောက်ကတော့ ဦးနှောက်ရောင်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံထားရတဲ့ ခြင်ကိုက်ပြီး ၅ ရက်ကနေ ၁၅ အတွင်းမှာ
အပြင်းဖျားခြင်း။ တက်ခြင်း။ ဇက်ကြီးတောင့်သွားခြင်း
သတိလစ်ခြင်း။ စကားမပြောနိုင်တော့ခြင်း။ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ထိန်းမရအောင် လှုပ်ခါရမ်းနေခြင်း
နောက်ဆုံး အသက်သေဆုံးတဲ့အထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဖြစ်လာခဲ့ရင် ကုသဖို့ ဆေးမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ကြိုတင် ကာကွယ်လို့ရပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေး အမျိုးအစား ၄ မျိုး ရှိပါတယ်။ တစ်ကြိမ်ထိုးရုံနဲ့ ကာကွယ်မှု ရနိုင်တယ်လို့ ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) က ဆိုထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထိုးပြီးရင်လည်း ထပ်ထိုးလို့ ရပါတယ်။
ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင် ကာကွယ်ဆေးနဲ့ မတည့်တဲ့သူတွေ။ ကိုယ်ဝန်သည်တွေ။ ယခင်က ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဓာတ်မတည့်မှု ဖြစ်ဖူးလျှင်အခုထိုးတဲ့ဆေးဟာ live vaccine ဖြစ်တဲ့အတွက် မွေးရာပါ ရောဂါတစ်ခုခုကြောင့် ကိုယ်ခံအားနည်းနေတဲ့သူတွေ ၊ AIDS ရောဂါသည်တွေ မထိုးသင့်ပါ။ပြင်းပြင်းထန်ထန် နေမကောင်းဖြစ်နေကြသူများ အနေနဲ့ မထိုးသင့်သေးပါဘူး။
ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်အတွက် တတ်သူနားလည်သူများနှင့် မေးမြန်းပြီးမှ ထိုးသင့်သူများ
ဖျားနေသူများ။ ရောဂါအခံ တစ်ခုခုကြောင့် ဆေးသောက်သုံးနေရသူများ
ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဓာတ်မတည့်မှု ရှိဖူးသူများ အနေနဲ့ နားလည်တတ်ကျွမ်းသူတွေနဲ့ မေးမြန်းဆွေးနွေးပြီးမှ ထိုးသင့်ပါတယ်။ G6PD ရှိတဲ့ ကလေးငယ်တွေ အနေနဲ့လည်း WHO အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ မထိုးရဘူးလို့ ကန့်သတ်ထားတာမျိုး တော့ မရှိပါဘူး။ တချို့ ကာကွယ်ဆေးတွေဟာ G6PD ရှိတဲ့ ကလေးငယ်တွေကို သွေးယိုစိမ့်မှု့ ဖြစ်စေလို့ ထိုးပြီးရင် သတိထား စောင့်ကြည့်တာမျိုးတော့ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
ဆေးထိုးထားတဲ့ နေရာမှာ နာကျင်တာ ၊ ရဲနေတာ ၊ ရောင်နေတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အနည်းငယ် ငွေ့ငွေ့ဖျားတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တချို့ ကလေးငယ်တွေမှာ သတိလစ်တာ ၊ မေ့လဲတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးလို့ အမြင်အာရုံ ဝါးတာ၊ နားအူလာတာမျိုး ဖြစ်လာရင် ဆရာဝန်တွေကို ပြောပြသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုဖြစ်ပွားမှု့က အရမ်းကို ရှားပါတယ်။ ဘယ်ဆေးမဆို ဓာတ်မတည့်တာ ရှိတဲ့အတွက် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ဓာတ်မတည့်တာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါလည်း ရှားပါတယ်။ အယောက် တစ်သန်းလောက်မှ တစ်ယောက်လောက်ဖြစ်တာမျိုးပါ။
ဒီတော့ အကျိုးနဲ့ အပြစ်တွေကို ယှဉ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆို အကျိုးတွေ များတဲ့အတွက် အနာဂတ်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်လေးတွေကို ကျန်းမာထက်မြက်စေဖို့ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးသင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်။